Xaaladdii Deg Degga Ahayd oo Laga Qaaday Ethiopia
Baarlamanka dalka Ethiopia ayaa qaaday xaaladdii deg degga ahayd ee dalkaas lagu soo rogay sanadkii tagay, kadib bilo dibad-baxyo ah oo galaaftay nolosha boqolaal qof.
Baarlamanka oo maanta kulan gaar ah isugu yimid, ayaa ansixiyey tallaabadan waxyar kadib markii ay warbixin ka dhageysteen wasiirka gaashaandhigga Siraj Fegessa, oo sidoo kale madax ka ah taliska loo xil saaray inay la socdaan xaaladda deg degga ah.
Warbixintii uu baarlamanka ka hor aqriyey ayuu Fegessa ku sheegay in xaaladda nabadeed iyo tan ammaan ee dalka ay iminka horu-martay, inkasta oo walaacyo dhanka amniga ah ay weli ka jiraan qeybo dalka ka mid ah.
Xaaladda deg degga ah ayaa waxaa dalka Ethiopia lagu soo rogay 9-kii October ee sanaddii 2016 kadib markii qorshe la doonayey in lagu ballaariyo magaalada caasimadda ah ee Addis-Ababa uu dhaliyey dibadbaxyo isku rogay xadgudubyo siyaasadeed iyo kuwa ka dhan xuquuqda aadanaha.
In ka badan 600 oo qof ayaa lagu dilay qalaalasihii dhacay, waxaana lagu xiray in ka badan 21,000 oo qof. Wasiirka gaashaandhigga ayaa sheegay in 8,000 oo qof ay weli xabsi ku jiraan, waxaana lagu eedeeyey inay galeen dambiyo intii rabshadaha ay socdeen.